နှစ်ပေါင်း(၅၀)အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကို အရယူရန်ကြိုးစားရခြင်းအကြောင်း - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | April 29, 2020 | International News, Local News | No Comments
နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကို
အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့ (National Science Board) မှ ပညာရှင်ဖြစ်သူ ဂျိမ်းစ် (James Lawrence Powell) က ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု့နဲ့ပက်သက်တဲ့ စာတမ်းတွေကို လေ့လာကြည့်တာ စာတမ်းပေါင်း ၂၄၂၁၀ ကိုတွေ့တယ်။ ဒီစာတမ်းကို သိပ္ပံပညာရှင်ဦးရေ ၆၉၄၀၆ ဦးကရေးတယ်။ ဒါက ၂၀၁၃ နဲ့ ၂၀၁၄ ကြား၊ တစ်နှစ်အတွင်းမှာရေးတဲ့ စာတမ်းအရေအတွက်။ အားလုံးလိုလိိုက ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးမှု့ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ မီးခိုးငွေ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုကြတယ်။
ဒေါက်တာ ဟန်ဆန် (Dr.Hansen) ဆိုတဲ့လူက ပညာရှင်တွေကြားမှာ အတော်ဆုံးလူ။ နာဆာမှာညွန်ကြားရေးမှုးအဖြစ် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ ပက်သက်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု့ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်း။ ကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံနဲ့ဂက်စ်ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ကမ္ဘာကြီးပူလာတာဟာ သူတို့ကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ငြင်းကြတယ်။
နိုင်ငံတကာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု့ကို လေ့လာတဲ့အဖွဲ့ (The International Panel for Climate Change – IPCC) က ဒီလိုခန့်မှန်းတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတော့ ရေခဲတောင်တွေ အရည်ပျော်တယ်။ ပျော်တော့ ပင်လယ်ထဲကို စီးဝင်တယ်။ စီးဝင်တော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်က တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်။ ၂၂-ရာစုခေတ်မှာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှု့ကြောင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ တစ်မီတာမဟုတ်ရင် နှစ်မီတာလောက်မြင့်တက်လာမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘယ်လောက်မြင့်မလဲဆိုတာကို အတိအကျပြောလို့မရပေမဲ့ မြင့်တက်လာမှသေချာနေပြီလို့ ပြောတယ်။ ပြောတဲ့လူက ဒေါက်တာ ဟန်ဆန်။
နိမ့်တဲ့ဒေသတွေက ပိုပြီးခံစားရမယ်။ အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လို နိုင်ငံတွေ။ ဒီနိုင်ငံတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေမြုပ်နေပြီ။ အနာဂတ်မှာ ပိုဆိုးလာမယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြောက်ပိုင်းနဲ့စစ်တကောင်းတောင်တန်းတွေကလွဲရင် နောင်နှစ်ပေါင်း ၂၅-နှစ် အတွင်းမှာ ရေအောက်ထဲကို ရောက်သွားမယ်လို့ဒေါက်တာ ဟန်ဆန်က ပြောတယ်။
ဒါဆိုရင် မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ တကယ်လို့ရေအောက်ထဲကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်သွားရင် လူဦးရေ သန်း ၁၇၀-လောက် ဘယ်မှာသွားနေမလဲ။ နောက်ပြီး ဒီနိုင်ငံက တဖြည်းဖြည်း လူဦးရေက ပေါက်ကွဲထွက်နေတယ်။
ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ UN က ဦးဆောင်လုပ်နေတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က လူတွေကို မြန်မာပြည်ထဲကို ပို့ဖို့လုပ်နေတယ်။ OIC နဲ့ UN တို့ပေါင်းတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ယူကေက ထောက်ခံတယ်။
၂၀၅၀-ခုနှစ်ကြရင် သူ့လူဦးရေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က လုံးဝနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒိလူဦးရေကို မြန်မာပြည်က ကျွေးရလိမ့်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းနေကြပြီ။ ဒီလိုဖြစ်အောင် UN/OIC ၊ အမေရိကန်နဲ့ ယူကေတို့က အခုကတည်းက ပြင်ဆင်နေကြတယ်။
ပရော်ဖက်ဆာ ” ရေး” (အိန္ဒိယလူမျိူး) က တဖြည်းဖြည်းရေမြုပ်လာနေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပက်သက်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အတွက်ပြဿနာ (“Conflict Ahead for India, Myanmar: Drowning Bangladesh” on July 12, 2012.) လို့ခေါ်တဲ့ စာတမ်းတစ်ခုရေးတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာရေးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်။
အဲဒိစာတမ်းထဲမှာ ဘာပါလဲဆိုတော့ ၂၀၂၅-ခုနှစ်ကြရင် မြေနိမ့်ပိုင်းမှာနေတဲ့ လူဦးရေသန်း ၅၀-နဲ့ ၈၀-ကြားက ဘင်ဂါလီတွေကို နေရာရွှေ့မယ်။ ဂင်္ဂါမြစ်အောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ ဘင်ဂါလီတွေ။ ဒီကိစ္စက လုံးဝကို ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စ။ မလုပ်မနေရ လုပ်ရမဲ့ကိစ္စ။ မလုပ်ရင် ရေမြုပ်ပြီးသေကြလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာအတွက် ဒီကိစ္စက အရေးကြီးတယ်လို့ထောက်ပြတယ်။ ဘင်ဂါလီ လူဦးရေ သန်း ၁၅၀-လောက်က နှစ်ပေါင်း ၂၅-နှစ်နဲ့ ၃၀-အတွင်းမှာ အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောက်လာကြလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာကလွဲရင် ကျန်တဲ့နေရာ မရှိတော့ဘူးလို့ စာတမ်းမှာရေးထားတယ်။
အိန္ဒိယက သိတဲ့အတိုင်း လူဦးရေသန်းထောင်ကျော်နေပြီ။ သူလည်း လူတွေ တအားများနေပြီ။ ဘင်ဂါလီတွေကို သူ့နိုင်ငံမှာ လက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ စာတမ်းမှာ ပြန်လည်ထောက်ပြထားတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်မလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ။ မြန်မာဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထက် ငါးဆလောက်ကြီးတယ်။ လူဦးရေက သန်းငါးဆယ်ကျော်။ မြေကောင်းတယ်။ သယံဇာတပေါတယ်။ ဒီနိုင်ငံဟာ အကောင်းဆုံးနေရာပဲဆိုတာ အငြင်းပွားစရာ မရှိဘူးလို့ စာတမ်းက ပြောတယ်။
စာတမ်းထဲမှာ ထပ်ပြီးထောက်ပြတာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာ ဒီကိစ္စကို ဖြစ်ဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ကျိုးစားပြီး ဖန်တီးနေတယ်လို့ပြောတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Foothold လို့ခေါ်တယ်။ စတင်ခြေချနေပြီလို့ ဘာသာပြန်ရမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း So called ရိုဟင်ဂျာ။ တကယ့်ကို မဟာဗျူဟာကျကျ စီမံကိန်းလို့ပြောတယ်။ အဲဒိကနေတဆင့် တနိုင်ငံလုံး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝါးမြိုမယ်။
1) Comments to the article from Hla Oo’sBlog: UN Preparing Burma Absorb Sinking Bangladesh’s Millions ( January,28,2014).
အိမ်အကူမိန်းကလေးအားညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူကိုထောင် တစ်လနှင့်ငွေဒဏ် ကျပ် သုံးသိန်းအမိန့်ချ
မှတ်ပုံတင်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် အိမ်ထောင်စုဇယား အတုလုပ်သည့်ဂိုဏ်းကိုဖမ်းမိ
တာချီလိတ်တွင် ဒေသန္တရအမိန့်ဖေါက်ဖျက်ပြီး သင်္ကြန်ပါတီကျင်းပသူများကို ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သော ဉပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ခွေးများ အူလျှင် သတိထားရမည့် အရာနှင့် ခွေးအူလျှင် လုပ်ဆောင်ရ မည့် အရာမျာ; (5,233)
ဇာဂနာ ဒဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နိုင်ငံ့ အရေး (5,062)
ကောလင်း PDF က စကစ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လိူင်နှင့် ဒုချုပ် စိုးဝင်းထံသို့ တောင်းပန်စာပို့ (4,563)
အမျိုးသား၂ ဦး ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ရတဲ့ ကယ်ရီ အသင်း ဖွဲ့စည်း (4,334)
အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်မှု နှင့် COVID ကပ်ရောဂါ (4,102)
မှန်လွန်းလို့ နာမ်မည်ကြီးနေတဲ့ ထိုင်းဆရာတော်ရဲ့ သိန်းတစ်ရာတန် ဂဏန်း
နေစရာမရှိလို့သူများအိမ်အောက်လေးမှာ နေနေရတဲ့သနားစရာ မျက်စိတဖက်မမြင်ရှာသော အဖွားအိုရဲ့အဖြစ်
ဖိအားတွေပေးတိုင်း ပိပြားကြကြေးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အနေဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရလာမှာ မဟုတ်သလို မြန်မာနိုင်ငံ ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ပြောကြား
ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက စစ်လေယဥ်တွေကို ပစ်မချဖို့နဲ့ မိမိစခန်းချရာ နေရာတွေကို သတ္တိရှိရှိ အမှတ်အသားများ ထင်ရှားစွာပြထားကြဖို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကို တောင်းဆို
နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကို သိမ်းယူခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာမှုရှိစေရေး ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက် နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း န-စ-က ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
အနောက်အုပ်စုနှင့် ဆက်ဆံရေးပိုမိုတင်းမာလာပါက လက်တင်အမေရိကသို့ တပ်များစေလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရုရှားပြော